War Deg Deg Ah:-Hargaysa Oo Hada Lagu Dilay….. – KHAATUMO NEWS
War Deg Deg Ah:-Hargaysa Oo Hada Lagu Dilay…..
DEG DEG :
Waxa iminka lagu diley Magaalada Hargaysa gaar ahaan Xaafadda guryaha Shaqaalaha ee ka ag dhaw , Ruux gabadh ah taas Oo sida ay noo sheegeen goob-joogayaali uu diley nin ka tirsan Ciidamada Maxkamadda snm, waxaana uu u adeegsaday dilka gabadhaasi qori.
Kedib markii uu dilka gaystay ayaa uu isku dayey in uu baxsado balse Ciidanka Deb-demiska ayaa Soo qabtay ninkaasi.
Dilkan ayaa dhacay Xilli ay gabadhu ku jirtay gudaha gaadhi ay wadatay.
Gabadha oo ah xaafadda Qudhac-dheer ayaa Soo bookhatay Xiliga dilka loo gaystay guri ay degenayd habar-yarteed.
Cabdiqaaddir Nacayb – Tire
Previous Post: Deg Deg Daawo:-Garaad Cabdirashiid Waraabe dheere oo Shacabka Khaatumo u diray fariin
Next Post: Farmaajo oo xalay u calaacalay Xildhibaanada Beelaha Dir
Majeerteen iyo dhulbahante iyo warsame geli waa walaalo weliba aad isugu dhow puntland waa wada dhisteen si xaq ah bayna wax u qaybsadeene kawaran adigu maamulka isaaqland ee ilaa kan usareeya iyo kan u hooseeya ay isku beesha yihiin oo hadana hadlaya af nooli waa hadlaa eyna wuu ciyaaa kkkkk
Dhulbahante iyo Warsangali
Waar iska dhaaf gacan-ku-dhiiglahaa la qabtayoo waxaad ka warrantaa dulmiga uu Majeerteenku ku hayo Ahmed Karaash iyo guud ahaan Warsangaliga iyo Dhulbahantaha maanta ogaaday khalakii ay galeen markii ay dalkooda hooyo ka carareen ee ay ka talaabsadeen xadka caalamiga ah ee u dhexeeya jamhuuriyadda Somalialnd iyo Soomaaliya oo ay Puntlaana ka tirsantaha. Xigasho Adeero Xasan Maal.